इ–पासपोर्ट छपाइमा खेलबाड : दोस्रोपटक टेन्डर रद्द, नयाँ टेन्डरको छैन भर | Samajik Khabar
Home मुख्य इ–पासपोर्ट छपाइमा खेलबाड : दोस्रोपटक टेन्डर रद्द, नयाँ टेन्डरको छैन भर
काठमाडौं : विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट)का लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया दोस्रोपटक रद्द भएको छ । सरकारले २० लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको टेन्डर सोमबार रद्द गरेको हो ।
‘यसअघिको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो । विभिन्न चार कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रमा सबैका कागजातमा समस्या देखिए । सबै कम्पनीका कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएकोे देखिएन,’ राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा विभागले ती बोलपत्र कागजात ग्रहण गर्ने र ठेक्का दिने भन्ने त हुँदैन नि ! अब विभागले पुनः बोलपत्र आह्वान (रि–बिड) गर्छ । यही साताभित्र यसको सूचना आह्वान गर्दै छौँ ।’
विभागले पेस हुन आएका बोलपत्र कागजातको त्रुटिलाई समस्या देखाएर ठेक्का रद्द गरे पनि बोलपत्रमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधिबीचको किचलोका कारण ठेक्का रद्द भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ठूलो आकारको ठेक्का भएका कारण यसमा ठेकेदारहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो । ठूलो आकारको ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूबीचको हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कैयौँ ठेक्का प्रभावित हुँदै आएका छन् । पासपोर्ट छपाइका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । इ–पासपोट छपाइ ठेक्का महँगो मूल्यमा दिने गरी गृहकार्य भएको सूचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट थिए ।
गत १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानीको शीघ्र आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय राहदानी, सोको प्रणाली, प्रविधि र उपकरण तथा राहदानी ‘बुकलेट पर्सनलाइजेसन’ कार्यसमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र विधिबाट अविलम्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा एक सातापछि विभागले १९ गते (२ मार्च) मा २० लाख थान इ–पासपोर्ट खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना जारी ग¥यो । ४५ दिने समयावधि तोकेर उक्त बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
बोलपत्रको सूचना जारी भएको एक महिनापछि १८ चैतमा विभागले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’बाट सम्भाव्य बोलपत्रदाताको सहभागितामा ‘प्रि–बिड’ बैठक ग¥यो । बैठकमा १३ कम्पनीका २४ विदेशी र चार स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । तोकिएको डेढ महिना अवधि (४ वैशाख) सम्ममा आवश्यक मात्रामा बोलपत्र प्राप्त हुन नसकेपछि बोलपत्रमा सहभागी हुने समय थप गर्दै लगियो ।
विभागले २ जेठ (१५ मे), १ असार (१५ जुन), ३१ असार (१५ जुलाई) हुँदै १६ साउन (३१ जुलाई) बोलपत्र खोलेको थियो । अन्तिम समयसम्ममा विभागमा चार कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको विभागको भनाइ छ । जसमा चीन, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीका एक–एक कम्पनी सहभागी थिए । तर, कागजात नपुगेको र प्रक्रियाको कमजोरी औँल्याउँदै विभागले पछिल्लो टेन्डर पनि रद्द गरिदिएको छ ।
राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेल भन्छन्–
यसअघिको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो । विभिन्न चार कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रमा सबैका कागजातमा समस्या देखिए । सबै कम्पनीका कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएकोे देखिएन, कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा विभागले ती बोलपत्र कागजात ग्रहण गर्ने र ठेक्का दिने भन्ने त हुँदैन नि ! अब विभागले पुनः बोलपत्र आह्वान (रि–बिड) गर्छ । यही साताभित्र यसको सूचना आह्वान गर्दै छौँ ।
यसैबीचमा नेपालमै सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस छापाखाना स्थापना गर्ने निर्णय २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । यही प्रकरणमा घुसको बार्गेनिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्र्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यो विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
नेपालमै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णयपछि प्रन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीव्र आलोचना भयो । यसमा बहालवाला मन्त्री नै संलग्न भएको आरोप लागेपछि सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द ग¥यो ।
अहिले विभागसँग पासपोर्टको मौज्दात पाँच लाख छ । यो साबिकको सामान्य अवस्थाको हिसाब गर्दा एक वर्षलाई पुग्नेजतिको मौज्दात हो । मौज्दातमा रहेको पासपोर्ट सकिँदा इ–पासपोर्ट आइसक्ने विभागको अनुमान थियो । तर, मौज्दात घट्दै जाने अवस्थामा नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले लामो समय लिँदा एक वर्षपछि पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना बढेर गएको छ । राहदानी विभागका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘कानुनअनुसार २१ दिनको सूचना जारी गरेर रि–बिड गर्न पाइने व्यवस्था रहेछ । अब यही बाटोबाट जान्छौँ । यो प्रक्रिया सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने डेढदेखि दुई महिनामा कम्पनी छनोट भई सम्झौता हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसो भयो भने ६ देखि नौ महिनामा पासपोर्ट छपाइ सुरु हुन्छ ।’
इ–पासपोर्ट लागू गर्ने सरकारको योजना आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखिको हो । उक्त आवको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१५ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आव ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१५ भित्र प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण हस्तलिखित राहदानीलाई ‘मेसिन रिडेबल’मा प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिने उल्लेख थियो ।
सोही आवको बजेटमा आगामी आवभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई ‘मेसिन रिडेबल’मा प्रतिस्थापन गरी इ–पासपोर्टको सुरुवात गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै, आव ०७३/७४ को बजेटमा इ–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख थियो । आव ०७४/७५ मा पनि अघिल्लो आवकै कुरा दोहो¥याइएको थियो । आव ०७६/७७ को बजेटमा राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै इ–पासपोर्ट लागू गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो । चालू आवको बजेटमा आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०२५ पछि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई इ–पासपोर्टमा जानुपर्ने भनेको छ । नेपाल पनि आइकाओको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको राहदानीको सुरक्षण व्यवस्थाको स्तरोन्नति, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, भरपर्दो र नयाँ प्रविधियुक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप अघि बढ्नका लागि इ–पासपोर्ट आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । हालसम्म संसारभरका एक सय १५ वटा मुलुकमा इ–पासपोर्टको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, २३ असोज ०७५ मा राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित इ–पासपोर्ट अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिले उपसमितिमार्फत तयार गरिएको प्रतिवेदन २९ जेठ ०७६ मा स्वीकृत गरी बोलपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी तयारी तथा प्रक्रियाका आधारमा गत वर्षदेखि इ–पासपोर्टको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन् ।
Previous articleसाँझाले आजदेखि लामो दुरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्दै
Next articleमन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्डमा नेकपा सचिवालयमा कुरा मिलेन